Mpanamboatra sy mpamatsy MV Switch - China MV Switch Factory
GW-12 AC AC ivelan'ny fiara mifamadika
GW □ -12outdoor AC HV disconnect switch (disconnect switch ho an'ny fohy eto ambany) dia ampiasaina amin'ny rafi-kery herinaratra miaraka amin'ny 50Hz matetika, naoty 12kV naoty, dia natao indrindra hanamboarana na hanaparitahana faribolana eo ambanin'ny tsipika mamatsy herinaratra amin'ny fitaovan'ny rafitra fanapariahana hazavana avo any ivelany. Ny famaha ny karazana fanapahana karazana fahalotoana dia afaka mamaha ny tselatra maloto mandritra ny fiasa mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpampiasa any amin'ny faritra maloto be.
GW9-24 AC AC ivelan'ny fiara mifamadika
GW9-24 (W) andian-dahatsoratra tapaka ivelan'ny hop HV dia rafitra lava tokana, izay ampiasaina hanokafana na hanidiana faribolana eo ambanin'ny herinaratra fa tsy misy enta-mavesatra ao anatin'ny rafitra elektrika ivelany 24kV. Izy io dia nanamboatra hook hook sy self-locking fitaovana, ary ny effet effetement amin'ny insulate hook-stick. Ankoatr'izay, ny famadihana karazana fanoherana ny fandotoana dia afaka mamaha amin'ny fomba mandaitra ny tselatra noho ny loto mandritra ny fiasan'ny switch disconnect mba hanomezana fahafaham-po ny zavatra takian'ny mpampiasa amin'ny faritra maloto be.
GW5-40.5 ivelan'ny herinaratra mifamadika dia ampiasaina hanamboarana na hanaparitahana ny fantsom-piaramanidina avo lenta amin'ny rafitra 40.5kV, rafitra AC 50 / 60Hz. Izy io dia afaka manokatra sy manidy capacitance kely sy induction ankehitriny.
Ny karazana GW4 dia manapaka fantson-tseraseran'ny herinaratra avo lenta mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny GB1985-2004 AC mahery fantsom-pifandraisana AC sy Switches Earthing, IEC62271-102: 2002AC fanapahana fantsona sy famonoana tany, ary IEC60694: 1996 Andalana mahazatra amin'ny switchgear sy ny fitaovana fanaraha-maso.
GN30-12 (D) Andian-dahatsoratra havoana avo lenta ao anaty trano
GN30-12 (D) disconnect switch dia fitaovana elektrika an-trano ao anaty 12kV, AC50 / 60Hz dingana telo. Izy io dia ampiasaina hanamboarana fotoana fohy sy hamindrana ny fitaovana elektrika ho an'ny herinaratra HV amin'ny toe-javatra misy herinaratra sy tsy misy enta-mavesatra. izany
mandray rindrina amin'ny alàlan'ny fametrahana azy koa
GN19-12 (C) andiana herinaratra avo lenta ao anaty trano
Ny GN19-12 (C) switch disconnect HV anaty trano dia mihatra amin'ny rafitra herin'ny volavolan-tsipika 12kV, AC 50 / 60Hz. Izy io dia miaraka amin'ny mekanisma fandidiana manual CS6-1 ary ampiasaina hanapotehana sy hanamboarana faribolana ambanin'ny tsy misy enta-mavesatra. Misy karazana fandotoana fanampiny, karazana haavo avo ary karazana famantarana hery.